Warshadda cuntada lagu daro | Soo -saareyaasha Ku -darka Cuntada Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha
Soo-saaraha Shiinaha ayaa nadiifin sare leh 5-Ethyl-2-methylpyridine CAS 104-90-5 oo leh qiime wanaagsan
Kordhinta dhadhanka darajada Cuntada Guanosine 5′-monophosphate cusbada disodium (GMP-Na2) Cas 5550-12-9
Guanosine 5'-monophosphate milix disodium (GMP-Na2)
Guanosine 5′-monophosphate milix disodium waa xoojiye dhadhan kaas oo ah budad kristaliin ah, aan midab lahayn ama caddaan ah, oo leh dhadhan dabeecad leh. Waxay ku milmaysaa biyaha, si aan badnayn ugu milmi kartaa aalkolada, iyo ficil ahaan aan ku milmi karin ether. Waxaa lagu helaa isku -darka kiimikada. Waxaa sidoo kale lagu magacaabaa sodium 5-guanylate iyo disodium guanosine-5-monophosphate.
Iibinta kulul ee warshadda Cytidine CAS 65-46-3 oo leh qiimaha ugu fiican
Tayo sare 99% Uridine oo leh CAS 58-96-8 oo leh qiimaha warshadda
Iibinta kulul Uridine 5′-phosphate (UMP) CAS NO 58-97-9 oo leh qiimaha ugu fiican
Uridine 5a-fosfate (UMP)
Iibinta kulul Adenosine triphosphate milix disodium/ATP-2Na CAS 987-65-5 oo leh qiimo wanaagsan
Adenosine triphosphate milix disodium/ATP-2Na
Budada ATP, oo sidoo kale loo yaqaanno adenosine triphosphate disodium, waa soo -saare nucleotide, kaas oo ku lug leh dheef -shiid kiimikaadka baruurta, borotiinka, sonkorta, nucleic acid iyo nucleotide ee jirka. disenka adenosine triphosphate waxaa lagu dhex daadiyaa kooxaha adenosine bisphosphate iyo fosfate, isla markaana tamarta ayaa la sii daayaa waqti isku mid ah.
Qiimaha warshadda 99% Cytidine 5′-triphosphate milix disodium/CTP-Na2 CAS 36051-68-0
Cytidine 5′-triphosphate cusbada disodium/CTP-Na2
Cytidine 5′-triphosphate waa pyrimidine nucleoside triphosphate oo ku lug leh falcelinno kala duwan oo biochemical. Waxaa loo adeegsadaa isku -darka RNA ee polymerases RNA.
Ilaaliyeyaasha Cuntada FCCIV 99% Potassium Sorbate Granular E202
Badeecad: Sorbate Potassium
CAS Maya .: 24634-61-5
Muuqaalka: Dhagaxa Cad ama Budada
Qiimaha sorbate -ka potassium waa nooc cusub oo ah ka -ilaaliyaha cuntada, kaas oo hor istaagi kara koritaanka bakteeriyada, caaryada iyo khamiirka iyadoon si xun u saamayn dhadhanka cuntada. Waxay ku lug leedahay dheef -shiid kiimikaadka aadanaha, waxay leedahay badbaado shaqsiyeed, waxaana caalamku u aqoonsan yahay inay tahay ka -ilaaliyaha cuntada ugu fiican. Sunta ay leedahay ayaa aad uga hooseysa waxyaabaha kale ee ilaaliya, waxaana hadda si weyn loogu adeegsadaa cuntada. Sorbate -ka potassium -ka ee Insen wuxuu si buuxda u saamayn karaa saamayntiisa jeermis -dilaha ee dhexdhexaad ah aashitada, laakiin wuxuu leeyahay saamayn yar oo jeermis ah xaalado dhexdhexaad ah.